सहमहामन्त्री डा. महतको नेतृत्वमा कांग्रेसको टोली भारत प्रस्थान - Dhangadhi Khabar
आइतबार ०९, माघ २०७८ १२:०८
सहमहामन्त्री डा. महतको नेतृत्वमा कांग्रेसको टोली भारत प्रस्थान
नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महत नेतृत्वको कांग्रेस नेताहरुको टोली आज भारत भ्रमणका लागि नयाँदिल्ली प्रस्थान गरेको छ । भारतीय जनता पार्टीको निमन्त्रणामा डा महत नेतृत्वको टोली आज त्यसतर्फ लागेको हो ।
सो टोलीमा नेपाली कांग्रेसका नेताद्वय अजय चौरसिया र सागरशम्शेर राणा हुनुहुन्छ । पाँच दिनको भ्रमणका क्रममा उहाँहरुले भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष तथा नेताहरुका साथै भारतीय विदेशमन्त्रीसँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
बिहिबार २१, असोज २०७८ ०१:१४ मा प्रकाशित